Tsy milalao horonantsary YouTube ny iPhone. Ity ny antony & The Fix! - Iphone
telefaona sprint mitady serivisy
maninona no tsy mandeha ny efijery ipad ko
ny fomba fanovana ny mailako amin'ny ap apple
maninona aho no tsy afaka mifanerasera amiko
Hijery horonantsary YouTube amin'ny iPhone-nao ianao, saingy tsy hampidirina izany. Mahasosotra tokoa raha tsy mandeha amin'ny iPhone ny YouTube, indrindra raha manandrana mampiseho horonantsary mahatsikaiky amin'ny namanao ianao na mihaino horonantsary mozika ao amin'ny gym. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava aho maninona ny iPhone-nao tsy hilalao horonantsary YouTube ary hazavao ny fomba fanamboarana ny olana ho tsara.
Tsy mandeha amin'ny iPhone ny YouTube: Ity ny fanamboarana!
Andramo ny famerenana ny iPhone
Alohan'ny handehananao lavitra, andramo vonoina ny iPhone ary avereno indray. Ny famerenana amin'ny laoniny ny iPhone dia manome fanombohana vaovao azy ary manana ny mety hamahana olana olan'ny rindrambaiko madinidinika, izay mety ho antony tsy hilalaovan'ny iPhone ny horonantsary YouTube.
Mba hamonoana ny iPhone dia tsindrio ary tazomy ny bokotra herinaratra (izay fantatra koa amin'ny hoe Torimaso / Mifoha bokotra). Miseho amin'ny fampisehoana ny iPhone ny sary famantarana jiro mena sy ny 'Slide to power off'. Esory ny kisary jiro mena avy eo ankavia miankavanana mba hamonoana ny iPhone. Andraso antsasak'adiny eo ho eo alohan'ny hamerenanao indray ny iPhone anao, hahazoana antoka fa manana ny fotoana ahafahana mihidy tanteraka izy io.
Mamaha olana amin'ny fampiharana YouTube
Raha namerina namerina ny iPhone-nao ianao saingy mbola tsy mandeha ny YouTube, ny dingana manaraka dia ny famahana ny olana mety hitranga ateraky ny fampiharana ampiasainao hijerena YouTube. Misy fampiharana maimaimpoana sy karama be dia be azonao ampiasaina hijerena ireo horonantsary YouTube amin'ny iPhone, tsy misy lavorary na iray aza. Rehefa misy tsy mety dia tsy afaka mijery ny horonantsary YouTube tianao ianao.
Mba hamaritana raha toa ka mahatonga ny olana ny fampiharana YouTube anao dia hanomboka amin'ny fanidiana sy fanokafana azy izahay. Ity dia hanome ny app ho 'do-over' raha sanatria ka misy tsy mety rehefa nosokafana voalohany.
Hanakatona ny fampiharana YouTube anao, manomboka amin'ny tsindrio indroa ny bokotra Home. Hanokatra ny App Switcher io, ahafahanao mahita ny fampiharana rehetra misokatra amin'ny iPhone-nao izao. Esory eo ambony efijery ny fampiharana YouTube anao hanidiana azy.
Raha tsy manana bokotra Home ny iPhone dia aza manahy! Azonao atao ihany ny miditra amin'ny switch app. Sokafy fotsiny ny fampiharana YouTube (na fampiharana hafa). Vantany vao misokatra, swipe ambony ambany ny efijery ary efa vonona ianao! Tokony ho afaka nitety sy nanakatona ny fampiharana anao tahaka ny nataonao tamin'ny iPhone taloha ianao.
ny iphone-ko tsy andefasako sary
Zahao ny fanavaozana: Misy fanavaozana azo alaina ao amin'ny fampiharana YouTube ve?
Raha tsy mandeha ny YouTube aorian'ny hanakatonanao ny rindrambaiko, zahao mba hinoanao fa nanavao ny fampiharana YouTube anao amin'ny kinova farany farany ianao. Manavao ny fampiharana azy ireo mandrakariva ny mpamorona mba hanampiana fiasa vaovao sy hametahana bibikely rindrambaiko.
Raha te hahita raha misy fanavaozana azo alaina ho an'ny fampiharana YouTube anao, sokafy ny App Store. Manaraka, tap ny Sariitatra kaonty , ary midina mankany amin'ny vaovao farany faritra. Raha misy fanavaozana, tsindrio ilay manga vaovao farany bokotra eo akaikin'ny fampiharana.
Esory ary avereno ny app YouTube anao
Raha misy olana rindrambaiko sarotra kokoa amin'ny app YouTube tianao, dia mety mila mamafa sy mametaka ilay app ianao. Rehefa esorinao ny rindranasa dia hamafa amin'ny iPhone-nao ny rindrambaiko sy ny fikirakira rehetra avy amin'ilay fampiharana. Rehefa apetraka indray ilay app dia ho toy ny nisintona azy voalohany ianao.
aiza ny fivarotana app
Aza manahy - ny kaonty YouTube anao dia tsy ho voafafa rehefa mamafa ny fampiharana ianao. Raha mampiasa fampiharana YouTube misy karama toy ny ProTube ianao dia ho afaka hametraka azy io maimaimpoana raha mbola tafiditra ao amin'ilay Apple ID izay nampiasanao ianao rehefa nividy ilay fampiharana tany am-boalohany.
Mba hamafana ny fampiharana dia atombohy amin'ny fanindriana mazotoa sy mitazona ny kisary amin'ny fampiharana YouTube anao. Tsindrio hatrany mandra-pisehon'ny menio kely miraikitra amin'ny kisary fampiharana. Avy eo, paompy Delete App , avy eo hamafiso ny hetsika amin'ny alàlan'ny fanoratana Mamafa .
Raha hamerina hametraka ilay fampiharana dia mankanesa any amin'ny App Store. Tsindrio ny kiheba Fikarohana eo ambanin'ny fampisehoana iPhone anao ary soraty amin'ny anaran'ny fampiharana YouTube tianao. paompy Mahazo , avy eo hametraka eo akaikin'ny fampiharana YouTube tianao indrindra hametrahana azy amin'ny iPhone.
Raha apetrakao indray ilay rindranasa ary mbola tsy mandeha ny YouTube dia tohizo ny famakianao toro-hevitra bebe kokoa!
Vahaolana ny olan'ny Wi-Fi izay mahatonga ny YouTube tsy hitondra entana
Betsaka ny olona mampiasa Wi-Fi hijerena horonantsary YouTube amin'ny iPhone-ny, ary tsy fahita firy amin'ny olan'ny fifandraisana izany antony tsy handehanan'ny horonantsary YouTube amin'ny iPhone-nao. Raha ny olana dia vokatry ny fifandraisan'ny iPhone amin'ny Wi-Fi, dia mila fantarintsika na olana momba ny rindrambaiko na ny fitaovana io.
Andao horesahintsika haingana ny fitaovana: ny antena kely dia ny singa finday ao amin'ny iPhone izay tompon'andraikitra amin'ny fampifandraisana amin'ny Wi-Fi. Ity antena ity koa dia manampy ny iPhone hifandray amin'ireo fitaovana Bluetooth, ka raha ny iPhone nisedra olana Wi-Fi sy Bluetooth niaraka tamin'izay dia mety hisy olana amin'ny antena. Na izany aza, tsy azonay antoka hoe misy olana momba ny fitaovana, ka araho ny dingana famahana olana eto ambany eto ambany!
Atsaharo ny Wi-Fi ary avereno
Voalohany, hiezaka izahay hanodina ny Wi-Fi ary hiverina. Toy ny famonoana sy famerenana ny iPhone-nao, ny famonoana ny Wi-Fi sy ny fiverenany dia mety hamaha bug rindrambaiko madinidinika izay mety hiteraka fifandraisana Wi-Fi ratsy.
Mba hamonoana ny Wi-Fi ary hiverenany indray, sokafy ny fampiharana Setroka ary kitiho ny Wi-Fi. Avy eo, kitiho ny switch eo akaikin'ny Wi-Fi hamonoana ny Wi-Fi. Ho fantatrao fa maty ny Wi-Fi rehefa volondavenona ny switch. Andraso segondra vitsy alohan'ny hikasihan-tanana indray ny switch mba hiverenan'ny Wi-Fi indray.
Ahoana no hamerenanao ny efijery mikasika ny iphone
Raha mbola tsy milalao horonantsary YouTube ny iPhone dia andramo ny mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi hafa raha azonao atao. Raha tsy miasa tambajotra Wi-Fi iray ny YouTube fa playf amin'ny iray hafa, dia mety misy olana amin'ny tambajotra Wi-Fi tsy mandeha amin'ny laoniny fa tsy ny iPhone-nao. Zahao ny lahatsoratray inona no hatao rehefa tsy hifandray amin'ny Wi-Fi ny iPhone-nao raha mila torohevitra fanampiny!
Zahao ny satan'ny mpizara YouTube
Alohan'ny hifindranao amin'ny troubleshooting farany, manara-maso haingana ny satan'ireo mpizara YouTube. Indraindray, hianjera na hiatrika fikolokoloana mahazatra ny mpizara azy, izay mety hisakana anao tsy hijery horonantsary. Zahao ny satan'ireo mpizara YouTube ary jereo raha toa ka mihazakazaka izy ireo. Raha olon-kafa maro no mitatitra olana, dia mety hidina ireo mpizara!
Rehefa mamerina ny fikirakira tamba-jotra ianao dia hamafana sy hamerina indray ny fikirana Wi-Fi, Bluetooth ary VPN (Virtual Private Network). Mety ho mafy ny manara-maso ny tena antony mahatonga ny olana amin'ny rindrambaiko, ka tsy hanaraka azy io fa hamafana sy hamerina hametraka ireo fikirakirana tambajotran-iPhone rehetra anao.
Tadidio: Alohan'ny hamerenanao ny fikirakirana tambajotran'ny iPhone anao, alao antoka fa manoratra daholo ny teny miafinao Wi-Fi ianao! Ampidirinao indray izy ireo rehefa vita ny famerenana.
Raha hamerina ny fikirakirana ny tambajotra dia atombohy amin'ny fanokafana ny fampiharana Settings. Peho ny General -> Avereno -> Avereno ny fametrahana ny tambajotra. Hasaina hiditra ny kaody passcode-nao ianao, avy eo hamafiso fa te hamerina ny fikirakira tambajotra iPhone-nao ianao. Hiverina indray ny iPhone raha vantany vao vita ny famerenana.
Miasa amin'ny iPhone-nao ny YouTube!
Miasa amin'ny iPhone-nao ny YouTube ary afaka mijery ny horonan-tsary tianao indray ianao. Hamarino tsara fa hizara ity lahatsoratra ity amin'ny media sosialy hahafantaran'ny namanao sy ny fianakavianao ny tokony hatao rehefa tsy milalao horonantsary YouTube ny iPhone. Misaotra anao namaky ity lahatsoratra ity, ary avelao ny fanehoan-kevitra etsy ambany raha te hanontany anay momba ny iPhone ianao!